BF Soomaaliya oo ka doodayo Mooshin cusub
Baroor Diiq qaran oo loo qabtay Wasiir ku xigeenkii hore ee Wasaarddda X.Xoolaha Dhirta& Daaqa
Abuu Mansuur oo saxaafadda la hadlay muujiyayna mowqifkiisa
Maamulka Degmada Boholgaras oo Qarka u saaran in lakala diro
Ururka Active oo ay iskugu soo hareen Gudoomiyaha iyo laba saaxiibadii ah
Home » GORFEYN » BF Soomaaliya oo ka doodayo Mooshin cusub
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan yeelanaya waxeyna ka doodi Mooshin cusub oo ku aadan in la joojiyo badeecadaha dibadda laga keeno ee dalka laga heli karo.
Mooshinkan cusub ee ka doodistiisa maanta Xildhibaanada guda galayaan ayaa waxaa Gudoonka Baarlamaanka Somalia u gudbiyay 50-Xildhibaan, kuwaa dalbaday joojinta soo dhoofinta badeecadaha laga heli karo dalka.
Xildhibaanada Mooshinkan gudbiyay qaarkood ayaa sheegay in Mooshinkan cusub uu leeyahay muhiimad gaar ah uuna dhiira galinayo wax soo saarka dalka laguna joojinayo waxyaabaha qaar ee dibada laga keeno.
Mooshinkan cusub ee Baarlamaanka maanta ka doodayaan ayaa ka bedelan mooshinadii hore oo inta badan ku saabsanaa arimo siyaasad la xariira, waxaana mooshinkan soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed oo u aragta mid muhiimad gaar ah leh.
Xafiiska Boholgaras news
GORFEYN, MAQAALO, WARAR
warkii u danbeeyay
Golaha wasiirada oo an sixiyay arinta qalbi dhagax
Madax weynaha Maamul Goboleedka Galmudug oo ku dhawaaqay Golihiisa Wasiirada
Deg Deg Dagaal kharaar ka socdo Degmada Xeraale
Deg Deg Dowladda Federaalka oo cadeysay mowqifkeeda xil ka qaadissta Cosoble
Madaxweynaha iyo wafdi uu hor kacaayo oo ka ambabaxay Muqdisho halkee ayey ku wajahanyihiin?
Maamulka Degmada Boholgaras oo ku dhaqaaqay arrin ka yaabisay waxgaradka deegaanka
Xaaladda Xeraale oo dagan
Madax gaartay hirshabeele iyo rajada Cali Cabdullaahi Cosoble oo quus taagan
Madaxweynihii hirshabeele oo ka hadlay xil ka qaadistii lagu sameeyay
Liiska Golaha Wasiirada Putland oo lagu dhawaaqay
Buraan Bur loo tiriyay Wiilasha Boholgaras
© 2017 All rights reserved by: boholgaras.com